घर संयुक्त राज्य फुटबॉल स्टोरीहरू अंग्रेजी फुटबल खेलाडीहरू ज्याक ह्यारिसन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्य
हाम्रो ज्याक ह्यारिसनको जीवनीले तपाईंलाई उसको बचपन कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी हुनु, कारहरू, जीवनशैली र व्यक्तिगत जीवनको बारेमा तथ्यहरू बताउँछ।
अर्को शब्दहरुमा, हामी तपाईलाई जैक ह्यारिसनको शुरुको दिनदेखि नै प्रसिद्ध बनेको संक्षिप्त जीवन कहानी प्रस्तुत गर्दछौं। तपाईंको भोक मेटाउन, चित्रहरूमा उसको बायोको सारांश जाँच गर्नुहोस्।
धन्यबाद, जैक ह्यारिसनको साथ मजबूत स्ट्राइक साझेदारी पैट्रिक बामफोर्ड २०२०/२०११ ईपीएल सत्रमा फ्यानहरूले धेरै रमाहट ल्याए। अब कसले विश्वास गर्छ होला कि म्यान युनाइटेड एकेडेमीबाट ड्रप-आउटले त्यस्तो प्रभाव पार्न सक्छ मार्सेलो बाइल्सालीड युनाइटेडमा टोली? धेरै धेरै भनेपछि, अब हामी तपाईंलाई उसको जीवन कहानी बताऊँ, शुरुका बर्षहरूको साथ।
ज्याक ह्यारिसन बचपन कहानी:
बायो स्टार्टर्स को लागी, उनको उपनाम 'होगोल्डी' ज्याक डेभिड ह्यारिसन नोभेम्बर १ 20 1996 November को नोभेम्बरको दिन उनका बुबा जोन जिब्लिन र आमा डेबी हरिसनको जन्म मध्य इ England्गल्यान्डको स्टोक-अन-ट्रेंट सहरमा भएको थियो।
तपाईको अ Foot्ग्रेजी फुटबलरको एक भाइ र बहिनी छ, यद्यपि उहाँ आफ्ना बाबुआमाको मिलनबाट जन्मेको एकमात्र बच्चा हो भनेर चिनिन्छ। त्यस पछि उनका बुबा र आमाको सम्बन्धले ज्याकको कान्छी बहिनी क्लाउडिया ह्यारिसन र बच्चा भाई कुपरलाई जन्म दियो।
उनको आमा र बुबाको स्प्लिट साक्षी गर्दै:
दुर्भाग्यवश, ह्यारिसन बच्चाहरूको वर्गमा परे जसका आमा बुबाको प्रेम सम्बन्ध विच्छेदको बाबजुद बिग्रिएको थियो। सत्य कुरा के हो भने, ज्याक ह्यारिसनका अभिभावक तीन वर्षको उमेरमा छुट्टिए।
उनको साहसी र अत्यन्त उत्साहित आमालाई धन्यवाद, ह्यारिसन आफ्नो छिमेकमा हरेक नियमित बच्चा जस्तै हुर्कन सक्छ। छक्कलाग्दो कुरा के छ भने, एक जना अंग्रेजले हिड्न सक्ने हुन अघि फुटबलको लागि एक जोड्न नसकिने संलग्नता विकास गरे। तल उनकी आमाको जैक ह्यारिसनको बचपनको जीवनी सारांशको एक प्रमाणिकरण छ। उनको शब्दहरूमा;
“ऊ months महिनाको उमेरमा हिंड्न थाल्यो, र दुई वर्षसम्म उसले; ऊ आफ्नो सानो बल संग वरिपरि हिंड्न थाले।
त्यतिखेर ऊ आफ्नो बलको साथ ओछ्यानमा जान्छ र ऊ सँधै निदाएको हुन्थ्यो।
उहाँ अझै पनी ठूलो निन्द्रा चालक हुनुहुन्छ। तर मैले उसलाई रातभरि आफ्नो बल खोज्दै हिंडिरहेको भेट्टाएँ। ऊ उठ्ने बित्तिकै उसको बाथरूममा सधै उसको खुट्टामा ड्रिब्ल हुन्छ। ”
ज्याक ह्यारिसन परिवार पृष्ठभूमि:
एकल आमाले हुर्काई जो एक कानुनी फर्ममा निजी सहयोगीको रूपमा काम गर्छिन्, अंग्रेजी बच्चालाई औसत जीवनशैली बच्चाको रूपमा सँभाल्छिन्।
त्यसबेला, उसको परिवार प्रत्येक मध्यम-मध्यम घर परिवारको जस्तो बस्थ्यो। तिनीहरू प्रकारका थिए जसले उनीहरूको थोरै वित्तीय प्रबन्ध गर्न सक्थे। सत्य कुरा के हो भने, हैरिसनले आफ्नी आमाले आफूलाई जे मनलागेको भन्दा बढी चाहेका थिएनन्।
ज्याक ह्यारिसन परिवार मूल:
फुटबलमा उसको दक्षता र प्रतिभाको स्तरको साथ, त्यहाँ इ England्ल्यान्ड र अमेरिकाले उनीसँगको आफ्नै एकको रूपमा पहिचान गर्दैन भन्ने तथ्यलाई इन्कार गर्ने कुनै ठाउँ छैन। हो, हैरिसन जन्मले अ English्ग्रेजी नागरिक हुन्। २०१ 2017 मा उनले युएस ग्रीन कार्ड पनि प्राप्त गरे।
के तपाईंलाई थाहा छ?… ह्यारिसनको जन्मस्थल, स्टोक-अन-ट्रेंट यसको औद्योगिक-माटोको भाँडो उत्पादनको लागि प्रसिद्ध छ। शहर इ England्ल्यान्डमा भाँडो उद्योगको घर हो।
ज्याक ह्यारिसन क्यारियर कहानी:
फेरी-टेलहरूमा जस्तै, सानो गोल्डी एउटा नम्र शुरुआत। त्यस्तै, ज्याकले आफ्नो फुटबल अभियान6मा शुरू गरे, जब उनले लिभरपूल फुटबल एकेडेमीमा प्रशिक्षण पाए। 8 बर्षको उमेरमा, जवान ह्यारिसनले कुनै दिन क्लबको लागि खेल्ने आशामा म्यानचेस्टर युनाइटेड एकेडेमीमा प्रवेश गर्न उफ्रिए। तपाईं उसलाई तल देख्न सक्नुहुन्छ?
हप्ताको चार पटक युनाइटेड ट्रेनको लागि बोर्डमा चढ्ने आफ्नो पीडित बच्चाको द्रुत सुधारबाट विचलित, ह्यारिसनकी आमाले उनका लागि अझ आशाजनक मार्ग योजना बनाई।
सर्वप्रथम डेबी ह्यारिसनले आफ्नो विचार आफ्नो छोरालाई बताउने सबैभन्दा दृढ विश्वासका साथ खोजिन्। त्यसकारण, उनले म्यानचेस्टर युनाइटेड एकेडेमीको भ्रमण गरिन। कडा कुराको बारेमा कुरा गर्दै, उनले एक पटक भने;
“एक दिन युनाइटेडको प्रशिक्षण मैदानमा मैले ह्यारिसनलाई एक तानातिर खिचे, र हामीले युवा टीमहरूको भित्तामा भएका सबै फोटोहरू हेरेका थियौं।
मैले मेरो छोरालाई सोधें, के तपाईं यी खेलाडीहरू मध्ये कुनैलाई चिन्नुहुन्छ? उनले जवाफ दिए; होईन त्यसो भए, मैले उसलाई बुझाउने प्रयास गरें कि तपाईं एकेडेमीमा हुनुहुन्छ त्यसैले यसले तपाईंलाई कतै लैजान्दैन। ”
ज्याक ह्यारिसन प्रारम्भिक क्यारियर जीवन:
अन्तमा उनले सबै कुरा गुमाउने जोखिम महसुस गर्दै, त्यो जवान अंग्रेजले आफ्नी आमाको कुरा सुने। त्यो क्षणमा नै ह्यारिसनकी आमाले अनुदान खोजे पछि उनले अमेरिकाको मेसाचुसेट्स, शेफील्डको बर्कशायर स्कूलमा स्थान पाए।
तपाईलाई यो जान्न चासो छ कि जैक ह्यारिसनको परिवारले आफ्नो स्कूल खर्च को लागी प्रति वर्ष $ 50,000 प्रतिबद्धता गरे।
यो क्षण उहाँ १ 14 वर्षको हुँदा भएको थियो। यो समय होरिसनले एकेडेमीमा सबै बच्चाहरूलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा नयाँ बाटो सुरू गर्न छोडे। उसले आफ्नो नयाँ स्कूलमा असहज महसुस गर्नुपर्दछ, सम्झौता भनेको उनको आमालाई सूचित गर्नु थियो जसले उहाँसँगै राज्यहरू यात्रा गर्न सक्दैनन्।
के अनुमान गर्नुहुन्छ?… बार्कशायरमा आइपुगेपछि (अमेरिकाको म्यासाचुसेट्स, काउन्टी), हैरिसनले पहिलो रात उनको आमाको घण्टी बयान गरे। आमा, मलाई यो मन पर्छ। गिलहरीहरू विशाल छन्!। खेलकुद र शिक्षाको मिश्रण, त्यस केटोले आफ्नो नयाँ घरमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे।
ज्याक ह्यारिसन जीवनी- फेम कहानी कहानी:
प्रशस्त विger्गरको शब्दमा, बर्कशायरमा सर्दा उसलाई फुटबलको साथ रचनात्मक हुने बढी अवसर प्रदान भयो। सत्य यो हो कि ह्यारिसनले म्यान युनाइटेड एकेडेमीमा रहँदा धेरै दबाबको सामना गर्नु परेको थियो। त्यतिखेर, प्रायः बच्चाहरूले आफ्ना प्रशिक्षण सत्रहरू आँसुको साथ समाप्त गरे।
२०१ 2015 मा ग्याटोराडे नेश्नल प्लेयर अफ द ईयर पुरस्कार पाएको दिन उसले महसुस गरेको उपलब्धीको भावनालाई सायद कमैले बुझ्न सक्छ। मात्र १ at वर्षमा उनले आफूलाई एक शक्तिशाली खेलाडीको रूपमा स्थापित गरेका थिए। एकै साथ, उसले आफ्नो हाई स्कूल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्‍यो जुन उसलाई एक विन-विन स्थितिमा राख्छ।
अमेरिकामा उनले फुटबललाई अझ बढी सकारात्मक तरीकाले जारी राखे। २०१ M एमएलएस सत्रको दौरान, भाग्यशाली हेरिसनले न्यू योर्क एफसीको लागि खेल्न थाले।
ज्याक ह्यारिसन सफलता कहानी:
Viera को व्यवस्थापन अन्तर्गत खेल्दै छ र साथ साथै किंवदंतियों को साथ andrea Pirlo, डेभिड भिल्ला र फ्रैंक लम्पर्ड उसलाई थप आत्मविश्वास दिए। सम्भवतः उसको आमासँगको उसको योजना बनाउने योजना अन्ततः भुक्तान गरिरहेको थियो किनकि उसले २ जून २०१2को न्यु योर्क शहरको लागि पहिलो गोल गर्यो।
के तपाईंलाई थाहा छ?… ह्यारिसनले पहिलो अक्टुबर २०१ 21 मा इ England्ल्यान्ड यु -११ टीमको लागि शुरुवात गरे। युनाइटेड किंगडम फर्किए पछि उनी म्यानचेस्टर शहरमा joinedणमा मिडल्सब्रु जानुभएकोमा सामेल भए।
चाखलाग्दो कुरा के छ भने, लीड्स युनाइटेडसँग उनका क्षणहरूले अझ बढी सन्तुष्टि प्राप्त गरे किनकि उनीहरूले २०१२ च्याम्पियनशिप जितेका थिए र EPL मा बढुवा भएका थिए। हार्दिक पल जाँच गर्नुहोस्।
को tutelage अन्तर्गत प्रशिक्षण पछि मार्सेलो बाइल्सा, ह्यारिसनले अनुभव गरे 'म यो विश्वास गर्न सक्दिन'क्षण उसले १२ सेप्टेम्बर २०२० मा प्रिमियर लिगमा पहिलो गोल बनाए।
सत्य हो, उनको गोल EPL मा १ years बर्षमा लीड्स पहिलो गोल भयो। बाँकी, हामी भन्छौ (तल उसको हाइलाइट भिडियो सहित), अब इतिहास हो।
ज्याक ह्यारिसन प्रेमिका / पत्नी को हुन?
वास्तवमा, प्रेमीहरू एक व्यक्तिको साथ विशेष बन्धन सिर्जना गर्ने आवश्यकताको इच्छा गर्दछन् जसले उनीहरूलाई पूर्ण महसुस गराउँदछ। ह्यारिसनका लागि त्यो विशेष व्यक्ति सँधै फिओरेल्ला अरबेन्ज भएको छ, जुन मोडल र २०१ model मिस एशिया प्रशान्त इन्टरनेसनलका लागि चौथो रनर-अप हो।
कुनै श doubts्का छैन, ह्यारिसनको प्रेमिका (फिओरेला) निश्चित छ साईड लाइनबाट प्रत्येक चोटि उसले पिचमा नियतिको आवाज पूरा गर्न मिल्छ। सायद तपाईलाई कहिल्यै थाहा भएन, फिओरेला ह्यारिसन भन्दा करीव तीन वर्ष जेठो छ र उनको भावी पत्नीको रूपमा जान सक्छ।
ज्याक ह्यारिसन व्यक्तिगत जीवन:
निस्सन्देह, उहाँसँग बढी समय बिताउनेहरूले उहाँको अत्यन्त उत्साही स्वभावको प्रशंसा गाएका छन्। ह्यारिसनको व्यक्तित्वमा थप प्रकाश दिन उहाँ रमणीय, भावुक र संसाधन हुनुहुन्छ। वास्तवमा, उसले वृश्चिक राशिको चिह्नका गुणहरू पाउँदछ।
के तपाईंलाई थाहा छ? ... ज्याक ह्यारिसनसँग पानीको साथ एक वा दुई चीज छ। उसको इन्स्टाग्राम पोस्ट मार्फत सर्फिंग गर्दा हामीले पत्ता लगायौं कि उहाँ समुद्र तटहरू र नदी दृश्यहरूमा भ्रमण गर्न रमाईलो गर्नुहुन्छ। कहिलेकाँही, उनले ती स्थानहरूमा फुटबॉल पनि लग्दछन्।
थप रूपमा, ह्यारिसनले अहिलेसम्म केही बहु-पक्षीय विशेषताहरू प्रदर्शन गरेका छन्। एक पटक, ऊ टेनिस वा गोल्फ खेलिरहेको छ, अर्को पटक, ऊ सायद माछामा जान सक्छ वा एनबीए खेलहरू हेर्न सक्छ। प्रशस्त खेलाडी को लागी, जीवन धेरै मनोरञ्जनात्मक हुन सक्छ किनकि उनी धेरै गतिविधिहरु मा लाग्छ।
ज्याक ह्यारिसन जीवनशैली:
हो, पेशेवर फुटबल खेल्नुको मतलब केटो केटोले ठूलो पैसा कमाउँछ। लीड्स युनाइटेड को २०२० पेरोलले जैक ह्यारिसनले अलि कम कमाइरहेको देखाउँछ कलविन फिलिप्स.
Weekly£,००० को साप्ताहिक ज्यालाका साथ, अंग्रेज एक विलासी जीवनशैलीको नेतृत्व गर्न सक्षम छन्। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, राम्रो पुरानो दिनमा फेरि एकेडेमीमा रेल चढ्ने उसको तनावको भुक्तानी भएको छ किनकि उनले धेरै महँगो कार र घर खरीद गरेका छन्। अन्तमा, उनीसँग आफ्नो बायो लेख्ने समयमा £ २.१ मिलियनको अनुमानित नेट वर्थ छ।
ज्याक ह्यारिसन पारिवारिक जीवन:
स्पष्ट रूपमा, उनको बुबाआमाको सम्बन्ध विच्छेद उसको पहिलो घर भाँचिएको हुन सक्छ; यद्यपि अंग्रेजले आफ्नो बुबा र आमासँगको सम्बन्ध तोड्न सकेन। हुनसक्छ उसको परिवारको अवस्थाले उनलाई स्वतन्त्र हुन गाह्रो बनाएको हुन सक्छ।
यस खण्डमा, हामी तपाईंलाई जैक ह्यारिसन परिवारको बारेमा उनकी आमासँग सुरु हुने बारेमा अझ राम्रा तथ्यहरू प्रस्तुत गर्दछौं।
ज्याक ह्यारिसन आमाको बारेमा:
सबैभन्दा पहिले र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, उसकी आमा सधैं मास्टर प्लान पछाडि मस्तिष्कको रूपमा श्रेय दिईन्छ जुन उसलाई आकार दिएको छ। डेबी ह्यारिसनमा एकल आमाको रूपमा ज्याकलाई हुर्काउन अथक प्रयास गर्दैछौं, एक अविश्वसनीय दूरदर्शिता जुन हामी आज देख्न सक्छौं। के तपाईंलाई थाहा छ? ... प्रतिभाशाली वि his्गर आफ्नो आमासँग यति जोडिएको छ कि उसले उसलाई उपनाम दिए 'मुम्सी'।
वास्तवमा, ह्यारिसनकी आमाले आफ्नो छोरालाई फुटबल एकेडेमीमा प्रतिबन्धित गरेर भाग्यलाई चुनौती दिएनन्। बरु, उनी चुपचाप आफ्नो कम्प्युटरमा अन्य विकल्पहरू अनुसन्धान गर्न उन्मुख भइरहेको खेलाडीलाई फुटबलमा सफल हुन मद्दत गर्छिन्। यसमा अचम्म मान्नु पर्दैन कि जैकले अक्सर आफ्नी आमालाई (डेबी ह्यारिसन) आफुले गरेका क्यारियर उपलब्धिहरु को श्रेय दिन्छ। उसको शब्दमा;
"म यस स्थानमा हुनको लागि धेरै आभारी छु, र मेरी आमा बिना, म यहाँ हुनुहुन्न।
त्यहाँ सानो तरीकाले मैले त्यो मार्ग अपनाउने बारे सोचेको कुनै तरिका छैन। तर मेरी आमाले धेरै गर्नुभयो र म उनको सहयोगको लागि अत्यन्तै कृतज्ञ छु। "
ज्याक ह्यारिसन फादरको बारेमा:
समयको बालुवाको माध्यमबाट ग्लाइडिंग गर्दा उसको जन्मजात सम्भाव्यता प्रयोग गर्न उसका बुबा बिना गाह्रो भएको थियो। भाग्य यो हुनेछ, Harrison आफ्नो बुबा जोन Giblin को फुटबल प्रतिभा विरासतमा आएको हुन सक्छ।
संक्षेपमा, ज्याक ह्यारिसनको बुबाले एक पटक स्थानीय लिग अफ स्टाफर्डशायरमा फुटबल खेल्नुभयो। तपाईं अनुमान लगाउन सक्नुहुनेछ कि ह्यारिसनले कहिलेकाँही उसको बुवालाई भेट्न पनि आउँदछ।
ज्याक ह्यारिसन भाई बहनहरूको बारेमा:
स्पष्ट छ, उनका आमाबुबाको सम्बन्धविच्छेदले उनीहरू एकतामा जन्मेका एकमात्र सन्तान थिए भन्ने तथ्यलाई छाप लगायो। यद्यपि उनका बुबा र आमाले छुट्टै तरीका अपनाए पछि उनीहरूले अन्य सम्बन्धहरूमा समेटेर लागेका थिए। यसकारण, ह्यारिसनकी आमाले डेभिड ह्यारिसनसँग विवाह गरे र उनकी बहिनी क्लाउडिया ह्यारिसनलाई जन्म दिइन्।
अर्कोतर्फ, उनको बुबाको पछिल्लो विवाहले उनका दुई भाइलाई जन्म दियो। ठिक छ, यो प्रशंसक वि्गरले आफ्ना बुवाहरू मध्ये एक जनाको नाम - कूपरको बारेमा केवल प्रशंसकहरू प्रबुद्ध भएका छन्।
ज्याक ह्यारिसन सम्बन्ध सम्बन्धका बारे:
सम्बन्धविच्छेदको सबै परीक्षाले जुन उसको परिवारमा हर्षको ज्योति मानीरहेकी छ, ज्याक हजुरबा हजुरआमाले फेरि खुशीको चिंगारी प्रज्वलित गर्न सक्षम छन्। सत्य यो हो कि, उनीहरूको उपस्थिति डेबीलाई सान्त्वना थिई, जसले महसुस गर्छिन् कि उनी यस्तो कठिन घडीमा एक्लै उभिएकी छैनन्। यसमा अचम्म मान्नु पर्दैन कि जब पनि मौका पाउँदा हैरिसनले हजुरबुबा र हजुरआमालाई भेट्न पाउँदा खुशी लाग्यो।
ज्याक ह्यारिसन अनटोल्ड तथ्य:
अंग्रेजको जीवन कहानी समाप्त गर्नु अघि, यहाँ केहि सत्यताहरू छन् जुन तपाईंलाई ज्याक ह्यारिसनको जीवनी बुझ्न मद्दत गर्दछ।
तथ्य # १: वेन रुनीमा बचपन शरारत:
म्यानचेस्टर युनाइटेडमा रहँदा, ह्यारिसन र अन्य बच्चाहरूले उनीहरूका नामहरू प्रथम-टीमरहरूको फ्रोस्टेड कारहरूमा कुँदिएका थिए। धेरै जसो पटक, वेन रोनी जहिले पनि बन्दुकको गलत अन्तमा खस्दछ।
तथ्य # १: तलब बिच्छेद र प्रति सेकंड आय:
सत्य भनिन्छ, एक ठाउँ खोज्दै मार्सेलो बाइल्साको टोलीले उसको फुटबल पोर्टफोलियो बढाएको छ। आर्थिक हिसाबले, ज्याक ह्यारिसन पनि यसमा छन् लीड्स संयुक्तमा शीर्ष दश सब भन्दा बढी सशुल्क खेलाडीहरू। हेर, यो जीवन कथा लेख्ने समयमा उसको तलब बिच्छेद भयो।
प्रति महिना £ 195,300
प्रति हप्ता £ 45,000
प्रति दिन £ 6,429
प्रति घण्टा £ 268
प्रति मिनेट £ 4.5
प्रति सेकेन्ड £ 0.07
हामीले रणनीतिक रूपमा ज्याक ह्यारिसनको कमाईको विश्लेषणलाई घडीको टिकटमा राखेका छौं। तपाईं यहाँ आउनु भएकोले आफूलाई कत्ति धेरै आयो भनेर खोज्नुहोस्।
जब देखि तपाइँ हेर्न शुरू गर्नुभयो ज्याक ह्यारिसनको बायो, यो उसले कमाएको हो।
तथ्य # १: पालतू जनावरहरू:
तपाईको मुडलाई पुन: सुधार गर्ने सब भन्दा सजिलो तरीका भनेको प्रत्येक दिन समय लिनु भनेको साधारण चीजहरूमा केन्द्रित गर्नु हो जसले तपाईंलाई आनन्द दिन्छ। यस सिद्धान्तको पालना गर्दै, ह्यारिसनले आफ्नो कुकुरमा गहिरो संलग्नता विकास गरेको छ। मनपर्‍यो ओली वाटकिन्स, उहाँ सामान्यतया आफ्नो पाल्तु जनावरको साथ धेरै तस्बिर लिनुहुन्छ र तिनीहरूलाई इन्स्टाग्राममा साझा गर्दछ।
उसको समग्र मूल्या his्कनहरू आफ्नो सम्भाव्यताहरूसँग तुलना गरेर, तपाईंले पाउनुहुनेछ कि अंग्रेजले अझै पनि आफ्नो बाहुलामा धेरै ट्रिकहरू छन्। मनपर्‍यो कर्टिस जोन्स, उहाँ ड्रिब्लिlingका लागि राम्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। ज्याक पनि पूर्व चेल्सी एकेडेमी स्टार संग समान त्वरणको आनन्द लिन्छ, तारिक लेम्प्टेइ.
म्यान युनाइटेड छोड्दै यसलाई प्रीमियर लिगमा पार्छ सधैंको लागि आफ्नो बायो को सबै भन्दा ठूलो अंश रहनेछ। यदि ज्याक ह्यारिसन युनाइटेडमै बसेका भए, उसले क्लबको टीममा यस्तो स्थान बनाउने थियो मार्कस राशफोर्ड, एकेडेमीमा पछाडि उसको मुनि कसको थियो? हामी यस प्रश्नको उत्तर कहिले थाहा पाउँदैनौं।
जे होस्, ह्यारिसन लाइफ स्टोरीले सधैं उसको फुटबलमा सफल हुन सुनिश्चित गर्न उसको आमाबुबा द्वारा लिइएको पौराणिक जोखिम प्रतिबिम्बित गर्दछ। निस्सन्देह, उनको परिवार उनको जीत मनाउँछ। साथै, उनको बुबा र आमा अलग भए पनि, सधैं उनको सानो तरिकामा उसलाई समर्थन गर्ने थियो।
हाम्रो ज्याक ह्यारिसनको जीवनी पढ्नको लागि धन्यबाद। दिमागमा राख्नुहोस् कि Lifebogger मा, हामी फुटबल खेलाडीहरूको कानुनी कथासँग तपाईंको जिज्ञासालाई सन्तुष्ट पार्नको लागि प्रयास गर्दछौं। हैरिसनको क्यारियर कहानीमा तपाईका विचारहरू के छन्?
पुरा नाम: ज्याक डेभिड ह्यारिसन
निक नाम: Goldie
जन्म मिति: 20th नोभेम्बर 1996
जन्मस्थान: स्टोक-अन-ट्रेंट, इ England्ल्यान्ड
पिता: जोन जिब्लिन
आमा: डेबी ह्यारिसन
Siblings: क्लाउडिया ह्यारिसन (बहिनी)
प्रेमिका / पति / पत्नी: फिओरेला अरबेन्ज
नेट मूल्य: £ 2.1 लाख
रुचि: माछा मार्दै, टेनिस खेल्दै, गोल्फ गर्दै र यात्रा गर्दै
उचाइ: १.1.75 मी (f फिट १ इन्च)